I-Kingsoft Office 2013 translation Spanish | Kusuka kuLinux
I-Kingsoft Office 2013 ukuhumusha kweSpanishi
nxumabiyela | | Okokufundisa / okwenziwa ngesandla / Izeluleko
Uma usebenzisa IKingsoft Office 2013 Ungasiza ngokuhumusha njengoba kulula kakhulu.
1.- Okokuqala asiqondisi umphakathi we-WSP:
Leli khasi likuGithub, lapho sizothola amaphakheji namafayela okwenziwa umphakathi we-WPS ngolimi ngalunye.
2.- Sizodinga ukulanda amafolda wezilimi zaseMelika zesiNgisi (en_US) nolimi lwesiSpanish.
Ngombala obomvu, ngigqamise ifolda yolimi lwesiNgisi saseMelika.
Ngokuluhlaza ngigqamise ifolda yolimi lweSpanish, ehunyushwa ngamalungu omphakathi waseMexico. Buka isithombe.
Ngemuva kwalokho senza ikhophi yolimi lwesiNgisi saseMelika (en_US). Sifaka ifolda e-US.
Ngemuva kwalokho sifaka ifolda ye-TS ebhalwe ngombala obomvu.
Uma sesingaphakathi sizothola amafayela okufanele siwahumushele esiSpanishi:
Silanda amafayela ngamunye bese siwahumusha.
Ngemuva kwalokho silanda ifolda yokuhumusha yolimi lweSpanishi. Ngokuluhlaza ngigqamise ifolda yolimi lweSpanishi.
Uma sesingaphakathi sizothola amafayela afanayo kepha amanye angaphelele ahunyushelwe olimini lwesiSpanish:
Ake sibheke isibonelo sokuhumusha
Ake sibheke ifayili nge-American English:
Masibone ifayili elifanayo kepha ngolimi lweSpanish:
Lapho uqhathanisa amafayela kusobala ukuthi ifayela ktengokuhle.ts Ekuhumusheni kolimi lweSpanish, imigqa eminingi yokuhumusha ayikho.
Yimigqa elahlekile okufanele siyibeke kufayela le-ktreasurebox.ts ngeSpanishi. Ukubheka ukuhunyushwa kwe-English English
Ukuhunyushwa kolayini bekhodi kulula kakhulu. Isibonelo kufanele sihumushe:
Ibhokisi Lomcebo = Isifuba Somcebo
Lapho-ke lapho amafolda anamafayela olimi ngalunye elandiwe, singaqala ngokuhumusha.
Singaxhumana namalungu omphakathi we-WPS ukubika ukuhumusha esikwenzile, singaxhumana nomuntu ophethe ukuhumusha.
Ngikhulumile nabasebenzisi abaningana, abanye abazi isiNgisi baye banikela ukusiza ekuhumusheni iKingsoft Office 2013.
Umqondo wami ukusebenza eqenjini lokuhumusha. Ngishiya i-imeyili yami uma kwenzeka noma yimuphi umsebenzisi enentshisekelo yokusiza ekuhumusheni: marianocordobario3 [at] gmail [dot] com
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Okokufundisa / okwenziwa ngesandla / Izeluleko » I-Kingsoft Office 2013 ukuhumusha kweSpanishi
Kuhle kakhulu. Manje kuzokwazi ukuhumushela i-Kingsoft Office ngokuphelele eSpanish.
Ekuqaleni ukuhumusha kwakungu- "es_MX" futhi kwaguqulwa kwaba ngu- "es" ngoba ngiphakamise kumdali ukuthi zonke izikhulumi zaseSpain zisebenzisane ekuhumusheni. Ngibambisene nasekuhumusheni kepha angisiye owaseMexico kepha ngiyiSpanish, ngakho-ke bengifuna ukubhala leyo ncwajana.
Ngakolunye uhlangothi, siyabonga ngokwazisa lo msebenzi, ukuhumusha okukhulu kakhulu futhi lapho abantu abaningi besebenzisana ngokushesha kuzophothulwa.
Futhi ngincoma ukusebenzisa i-Qt Linguist (efakwe kuma-qt4-dev-tools) ukuhlela amafayela we-.ts, kukhululeke kakhulu futhi kukhiqize.
Ngisebenzisa iGedit futhi angibanga nankinga.
Ungaxhumana nami .... Nginabantu engibajwayele abahlala e-US futhi abafuna ukusiza ngokuhumusha.
Ngikhulumile nabo. Ikheli lami ku-Google plus lithi: https://plus.google.com/104109746841092570517/posts
I-imeyili yami yile: marianocordobario3@gmail.com
Sicela ungondli le software ephathelene. Ukunikela okungcono kwiLibreOffice eyidingayo futhi kumahhala.
Nginikeza izithonjana ze
Abathuthukisi bayo bebengafuni usizo lwami… .. maqondana nekhodi nemibono nami nginikela ngezami…
Kepha angitholanga umsindo ovela kubathuthukisi beLibreOffice.
Ngibe nengxabano noTor Lillqvist… ..
Ngeshwa uTor noCaollan Mc Namara banomqondo weRetro HackFest bobabili basebenza kuphrojekthi ye-Gnome neRed Hat futhi kubo i-aesthetics akudingekile, benza izinto zibe zimbi njengezithonjana zeGnome.
Kungakho iLibreOffice iqhubeka nesixhumi esibonakalayo sesitayela se-Office 2003.
Abathuthukisi beLibreOffice abanendaba nokwenza ngcono ulwazi lomsebenzisi …… Mina nabantu abaningi sithumela ikhodi nemibono, kepha abanendaba nemibono evela ngaphandle.
Bakholelwa kuphela ukuthi iLibreOffice ingcono kunamanye ama-suites ngoba ingumthombo ovulekile, ovulekele labo okuthi uma ubulembu bemitapo yolwazi eyenziwe nge-VCL abayisebenzisela iLibreOffice bengenayo i-API noma ibhukwana labanye onjiniyela ukuze bafunde ukwenza uhlelo.
Ukukholelwa ukuthi iLibreOffice ingcono ngoba ingumthombo ovulekile ukuphanga noma i-chicana eshibhile ngempela.
Ukuphela kwento engicabanga ukuthi ungayenza ukuqhubeka nokuqhubekela phambili ngezithonjana zakho nemibono, okungenani nginganakekela ukubeka amanethiwekhi we-DL eceleni kwakho ukusabalalisa konke okudingayo, futhi ngiyangabaza ukuthi u-Elav noma uKzkg ^ Gaara bazokwenqaba.
Mayelana ne-KSoffice, ngabe azinabanikazi futhi bathola imali ngezinhlobo ezikhokhelwayo? Damn, khokha abahumushi ngaleso sikhathi, kulula kakhulu ukuthi "sawubona mphakathi, sisize mahhala, bese ukhokhela izinhlobo ze-PRO zokuhumusha kwakho futhi awusoze wabona ikhodi yomkhiqizo wethu;)".
Angimelene ne-KSOffice, kepha uma ngimelene nokusebenzisa umphakathi kumaphrojekthi avaliwe ngokusobala, akulungile. Eqinisweni, kwenzeka into efanayo nalapha eVenezuela ngeVtelca; empeleni emcimbini we-SL bathumele abathuthukisi emhlanganweni ovaliwe ngaphandle kokubatshela ukuthi kungani.
Ngemuva kokuzihlanganisa, zacelwa ngokuyisisekelo ukuthi zenze umshayeli abone ukuthinta nokuthinta imicimbi ku-All-in-one abafuna ukuyikhiqiza ngeCanaima Linux, kepha mahhala.
Hheyi, sizokwenza kanjani?
Asazi, kodwa sifuna umphakathi usisize
Kuthiwani uma besinika ihhovisi elinemishini yokuhlola ukuze sikwazi ukusebenza, futhi basikhokhele isikhathi abafuna ukuthi sisebenze ngaso?
Asinaso isabelomali salokho futhi sinezinyanga eziyisithupha kuphela
Ahm, uma kunjalo-ke, laba bathuthukisi abathathu, ngakho-ke, mengan and perennial, bangabahleli bezinhlelo abahle kakhulu lapha, futhi banikela ne-Linux kernel, banikeze imishini kubo, bahlela konke bese bebashiya njengenkokhelo , Angazi basuse
* Wonke umuntu wasukuma wahamba *
Isiphetho? Umphakathi awunangqondo, izindleko zesikhathi futhi uma besekela okuthile, kuyinto abangayisebenzisa ngokunenzuzo noma bayenze ibe mahhala ... noma bobabili.
Bengingazi ukuthi lokho sekwenzekile, kwenzeka nini lokho? haha bacabanga ukuthi ngoba i-vtelca ithengisa ngamanani ashibhile kufanele ubanikeze umsebenzi ?? .. haha ​​lokhu kwangihlekisa
Kubukeka sengathi awunalwazi noma uhlala efwini… .. google kancane ngalesi suite ngaphambi…. opine ??
Ngikhuluma nano ngabantu baseVtelca, inkampani yaseVenezuela "iSocialista". Hhayi nganoma yini ngawe, ngakho-ke zama ukuba nomngane othandekayo onobungane. Mhlawumbe yingakho abathuthukisi be-LO bengazilalelanga izicelo zakho.
Ngiyaxolisa ngabe sengiyiqonda kabi impendulo, eyayenzelwe uNano….
Aziniki ukubaluleka kwezicelo…. Ngoba abanantshisekelo yokuthuthukisa noma ukupholisha izinto ezibonakalayo ze-suite. Anginankinga yokubhala yonke i-GUI.
Kepha akukufanele ngoba abayithathi ikhodi yakho.
Mayelana neVtelca, kusobala ukuthi ngeke ngikunike amagama, kepha ngiyazi abantu abaningi ngenxa yemicimbi ye-SL engiyihlela nomphakathi wami noma labo abasimemayo ezweni lonke (iFudCon, njll.), babe nokuxhumana okuqinile ne-CNTI kanye nohulumeni (uma bengavumelani kungenye into) futhi emhlanganweni wethu wokugcina bangitshele le ndaba, bekungulo nyaka.
Angifuni amagama, ngiyabonga. Ngendlela uNano amema ngayo imisebenzi yalapha eMaracaibo abantu baseVelug balahlekile uu
Abantu bakwa-GLug nabo abenzi lutho, singamalungu ama-3 asebenzayo, engiwumdidiyeli wawo kuphela.
UNano uhumusha kuphela eminye imigqa, kimi ngumbhedo.
Asinikezi imigqa engu-5000 yekhodi ye-Qt noma yeJava yephrojekthi ye-Kingsoft Office.
thina sonke emphakathini we-WPS singabasebenzisi bohlobo lwamahhala lweKingsoft Office, labo abenza umsebenzi wokuhumushela olimini lwesiSpanish, silawula izenzo zethu.
Ungalindeli ushintsho olukhulu kusuka ku-LibreOffice futhi ungaceli isuti enikeza ukuhlanganiswa okugcwele nama-desktops we-Gnu / Linux.
Ngoba imibono nekhodi esetshenzisiwe kukhawuliwe (Imitapo Yezincwadi ye-Homemade VCL).
Ngiyaphinda ngithi onjiniyela bazokutshela kuphela ukuthi uyisebenzise ngoba ingumthombo ovulekile nokuthi ingcono kune-Apache OpenOffice.
Angisho ukuthi iLibreOffice ayisebenzi, kepha inomkhawulo futhi isazoqhubeka ibe njalo eminye iminyaka embalwa ngeshwa.
I-Qt, i-Gtk, i-Python Ruby, njll. Inama-API nama-manuals awo atholakala kubasebenzisi nakuma-newbies.
Imitapo yolwazi eyenziwe ekhaya ye-VCL ayinayo imanuwali noma i-API.
Angikuthandi nhlobo ukuthi onjiniyela bangakuphenduli, lapho ufuna ukusiza.
Ngikholwa ukuthi i-Kingsoft Office ingadaka inkantolo noma imakethe ebanjiwe iHhovisi elinayo namuhla, ize yebe abanye abasebenzisi beMicrosoft, idlale ngokungcola ngokukopisha iRIBBON. Ukwenza umncintiswano obaluleke kakhulu, njengoba kwenza iMicrosoft, ukudlala kabi.
Ukuyibuka ngelinye iso, njengoba kusho uLinus Torvalds.
ULinus akazange anqikaze ukwamukela ukungena kukaValve. Sidinga ukwesekwa yizinkampani ezinjengeValve neFreeware ukuze uhlelo olusebenzayo lwaziwe kangcono emhlabeni wonke, uma kungenjalo asisoze seqa 2% noma 3% yabasebenzisi emhlabeni wamakhompyutha, angifuni ukubona i-GNU / Linux imile .
Kufanele senze izinqumo ezifanele zokwephula umqondo wokuthi i-GNU / Linux isetshenziswa kuphela ngabasebenzisi abangu-2% noma abangu-3% emhlabeni
Cha, cha, ungacabangi ukuthi nami ngingumthandi weLO, iqiniso ukuthi alinazo izinto eziningi, yize i-KSO ingenzanga kahle kimi futhi namanje ayihlanganisi okuningi, kepha uma Ngifuna ukuyizama ukubona ukuthi ikuliphi izinga lokusetshenziswa elingafika.
Nge-LO ngenze umbiko wami we-internship, ngicabanga i-KSO noma i-Calligra yethesisi, enzima kakhulu, kepha ngaphandle kokuhumusha kweSpanishi kwizichazamazwi, ngithola kungenakwenzeka ukusebenzisa noma yikuphi okungenhla ngoba noma iliphi iphutha lomunwe lizongibiza othandekayo Ku ibanga lokugcina, nokulungisa amashidi angaphezu kwamashumi ayisihlanu "ekubukeni iso" akulula kakhulu.
Nokho, vele sengivele ngiyasazi isizathu se-interface ye-LO, uma isebenza ngabantu abasondelene nalokhu njengoba ingekho enye indlela ngaphandle kokubambisana ne- «Chinese office», ngibonile amanye amafayela ku-repo yaseGithub futhi kusekhona izinto ezingekho zihumusha njengokuyisisekelo njengesibonelo eminye imibala.
Angiqambi amanga kuwe CAT, ngithuthukise izithonjana ze-16 × 16 zebha eseceleni futhi isiphequluli seLibreOffice besifuna nje ukusiza. Akekho noyedwa kubathuthukisi bokudizayina ongiphendulile, ngumlawuli kuphela ophendulile.
Abantu abaningi bahambise ikhodi nemibono yesixhumi esibonakalayo.
Isibonelo u-Adriano Afonso waseBrazil,
Ngathumela imibono yami ngaleso sikhathi
Onjiniyela bakutshela ukuthi akusebenzi noma bakutshela ukuthi ngeke kube nezinguquko ezinqala esibonakalayo sokuqhafaza, bese bekopisha i-Apache OpenOffice kuphela.
Uma ubuza ukuthi ungahlelela kanjani ngemitapo yolwazi ye-VCL (eyenziwe ngokwakho), onjiniyela abakuphenduli, lapho ufuna ukusiza.
Mariano, okokuqala ngifuna ukukuhalalisela ngomsebenzi omuhle owenzile. Ngithola izithonjana ozithumele zikanokusho nobuchwepheshe obedlulele, futhi ama-mockups ayindlela yokwelapha yangempela.
Njengabaningi balabo abaphawule lapha, ngiyaxolisa kakhulu ukuthi yonke leyo mizamo ayinakusetshenziswa yiphrojekthi yamahhala, futhi ebaluleke kangako, njengeLibreOffice.
Ngiyaxolisa futhi ukuthi kulula noma kukushukumisela kakhulu ukuthi uhlanganyele nephrojekthi yangasese kunokusebenzisa iphrojekthi yamahhala.
Kuyimfucuza yangempela ukuthi umuntu onethalente lakho agcine enza ukuhumusha kwesethi yehhovisi lobunikazi.
Ngifisa sengathi ngandlela thile umphakathi wabasebenzisi beLibreOffice ungenza izwi lethu lizwakale kubathuthukisi be-LO. Okungenani kwenze kube lula ukulayisha enye isethi yezithonjana. Ngiyethemba ukuthi abanye babahlaziyi beza nendlela yokukusiza ukuthi iziphakamiso zakho zinakekelwe, ukuze kuzuze iLO nabasebenzisi bayo.
Ngakolunye uhlangothi, ngibona sengathi emjahweni wamahhovisi, isoftware yamahhala isalele emuva kakhulu. Namuhla kuzodingeka ukuthi sibe nenye indlela yamahhala kuma-google amadokhumenti, esivumela ukuthi sisebenze namadokhumenti ayinkimbinkimbi ngokubambisana, ngisho nakumadivayisi eselula, futhi sihlonipha ubumfihlo bethu.
Ngibona sengathi sikude nalokho.
Ngibhaliselwe izinhlu zamahhala, futhi ngasala nomqondo wokuthi izithonjana zakho zenqatshiwe ngenxa yezinkinga zelayisense ezingasonjululwanga, hhayi ngoba wenqatshwa. Manje iLibreOffice 4.2 inezithonjana ezintsha zeSifr, ungabeki abantu icala ngolaka
Ungabi yi-fanboy enjalo futhi ube ne-Fitoschido eyingozi, Uvikela okungacabangi.
Ngikhuluma iqiniso kubantu abanobufakazi, engilikhombisile kuma-link. Angiyena owedlule.
Izithonjana zeSifr aziqedi bonke abasebenzisi beLibreOffice abazi, ngisho nezithonjana zeSifr zeLibreOffice 4.2 aziphelele.
Futhi angifuni ukuphoqelela izithonjana zami, maqondana nelayisense ngishintshe ilayisense yezithonjana zami layinikeza ilayisense enginconyelwe yona nguMichael Meeeks, umqambi wohlelo engimhloniphayo ngoba ubethembekile kimi, wancoma ilayisense le-MPL 2.0.
Ngakucacisa kwasekuqaleni ukuthi inhloso yami kwakuwukusiza iphrojekthi ngezimpawu ezingekho zephrojekthi yeSifr. Ikakhulukazi ngezimpawu ze-16 × 16 isiphequluli nebha eseceleni ezingekho.
Ake ngicacise ukuthi izithonjana ze-Sifr (Izithonjana ezi-Flat) zibukeka zizinhle kakhulu.
Ngihalalisela u-Issa Alkurnas futhi ngimfisela inhlanhla. Kepha uMirek ungumuntu ongenanhlonipho ophikisana nemibono yabanye onjiniyela.
UMarco Sumari kusho
Iphrojekthi enesibonisi se-ribon esuselwe ku-libreoffice isivele iphumile kepha lokhu kwenzelwa ama-windows kuphela kuze kube manje :(, kahle, ngethemba lokuthi ngelinye ilanga abathuthukisi be-libreoffice bazoyicubungula. http://www.neoteo.com/merge-word-2014-procesador-de-texto-basado-en-libreoffice/
Phendula uMarco Sumari
"Ungayondli le software eyimfihlo" ... bls, blah, blah. Ngiyacela, uma isebenza kangcono kune-libreoffice, makube njalo. Okufanele umuntu akubheke ngukusebenza nokuhambisana okubeka ukuhlehla okuningi kwabaningi abafisa ukuthuthela ku-GNU / Linux.
Impela ngivumelana nawe, isiphetho onjiniyela abaningi abeza kuso ukuthi ayikho isoftware yamahhala noma umnikazi ophelele nokuthi bobabili kufanele bancedwe, kufanele siyeke ukushiseka ngokweqile.
I-KO ayihambelani ngaphezu kwe-LO kusho
Kepha iqiniso ukuthi Ihhovisi leKingsoft:
- ayikhombisi amafonti kahle
- ulenga ngokuqhubekayo
- ukuhunyushelwa olimini lwesiSpanishi akunamsebenzi
- ayisekeli i-opendocument
- ayikhululekile kepha icela umphakathi ukuthi wenze umsebenzi onzima wokuphina
- ayiguquli isuke esikhundleni kangcono kune-libreoffice (noma ngabe okuphikisanayo kuphindaphindwa kangaki izikhathi eziyinkulungwane)
Ukuphendula i-KO akuhambisani ngaphezu kwe-LO
Kungani usiza okuthile kuvaliwe? Akunangqondo noma isizathu sokuba khona.
Impela. Uma ngingazi ukuthi bazosebenzisa isithelo sesikhathi sami ngaphansi kwaziphi izimo, ngeke ngisebenzisane nabo.
«» »» »» Uma ngingazi ukuthi bazosebenzisa isithelo sesikhathi sami ngaphansi kwaziphi izimo, ngeke ngisebenzisane nabo. »» »» »».
Ngasiphi isikhathi ??? . Uma ungeke uhlanganyele noma kunjalo. Wonke umuntu uyazi ukuthi ungumsebenzisi weLibreOffice ophenduka abe:
Isiphetho sokuzenzakalela kwehhovisi elizimele eLinux kufanele likhululeke noma ligqekezelwe .. Kepha njengakho konke okusebenzisana, noma ngubani ofuna ukusebenzisana nanoma ngubani ongakwenzi, kufanele athule, yize mina uqobo ngingaboni mqondo.
Ngokwengeziwe, uma uphikisana ne-LO, ungafaka isandla kuCalligra ukuthi yize iswele okuningi ... okuningi ... isebenza ne-QT futhi uyaphikisana, ingabe kungokombhalo, kuyiqiniso?
Lapha ngidlala noMariano huh.
ILibreoffice ithi ivulekile, kepha iyinkohliso, noma ingaphezu kokukhohlisa ubuchwepheshe.
Akunakusetshenziswa ukwenza uhlelo olunemitapo yolwazi kanye nekhodi elenziwe ngesandla lingaqondakali komunye umuntu ngaphandle konjiniyela. Kuyafana nokwenza ikhodi yomthombo evaliwe. Iyafana… kufana ne-de-facto IP para-barrier. Umphumela uyefana: akekho ojoyina ikhodi yakho, akekho oyifakelayo, akekho oqondayo, akekho onikelayo.
Uma sengeza kulokhu ukuthi lapho ufuna ukufaka isandla, bakukhipha shitting ... buah, open kunelebula kuphela.
Ngakolunye uhlangothi, iKingsoft WP Office, ayizichazi njengomthombo ovulekile (futhi empeleni asinalo ulwazi ngekhodi yomthombo wohlelo), kepha yize kunjalo inokuxhumana okuningi nomphakathi wabasebenzisi ukwedlula i-libreoffice eyake yaba khona. selokhu ngaqala ukuyisebenzisa. (~ ~ 8 iminyaka isivele? Fuuuu), ngakho-ke isilingo esithi "a priori" siyingozi kancane. Ngokudabukisayo, okungenani uma kukhulunywa ngabasebenzisi abafuna ukusebenzisana, iKingsoft ivuleke ngokweqile kuneLibreoffice. Kude. Kude kakhulu.
«IKingsoft ivuleke ngokweqile kuneLibreoffice. Kude. Kude kakhulu."
Phew, amagama aqinile.
Kuma-libreoffice angahle abe njenge-pedantic njengoba umlingani engabonakala (hhayi kimi uqobo), kepha uma sikhuluma ngokuqonda ... ku-libreoffice, kepha shintsha izithonjana zibe ezika-marianogaudix ngaphandle kwezinkinga (ukuze ngizisebenzisele noma ngubani bona)
KuKingsoft "evuleke kakhulu" ungazishintsha izithonjana?
KuLibreOffice awukwazi ukushintsha izithonjana …… lelo iqiniso….
okuwukuphela kwento esiyenzayo ukufaka iphakheji ye-images_crystal noma i-images_human …… okusho ukuthi, ususa okuqukethwe okuza ngokuzenzakalela ku-LibreOffice…. Ukushintsha izithonjana kuLibreOffice kufanele ukwenze nge-terminal futhi akulula nge-newbie.
Ukuze ushintshe izithonjana e-Kingsoft Office kufanele uthole umkhombandlela lapho kutholakala khona izithonjana ze-Chinese suite bese uziguqula usebenzisa i-terminal …… akukho okuhlukile kulokho okwenzayo ku-LibreOffice lapho ushintsha izithonjana.
Ngizamile ukubeka izithonjana zakho kuLibreOffice futhi kuyasebenza, ngakho-ke, ngicela ungabi namaqiniso wokuzithoba.
Lokho kufakwa esikhundleni kwamaphakeji, futhi ukuthi akwenziwa ngokuchofoza kuyindaba ehlukile. Iqiniso ukuthi ilayisense liyayivumela, uma umuntu efuna bangakha isifaki seLibreOffice esinezithonjana ezifakiwe, ulayishe ku-AUR (ngokwesibonelo) bese uwagcina inqobo nje uma efuna, ngaphandle kwezinkinga.
Impela, nganoma iyiphi isoftware enezimpawu zayo kwifolda futhi engahlanganisiwe njengezinsizakusebenza "ngiyakwazi" ukuyishintsha, kepha ukwenza sengathi ngikwenza lokho ngesoftware yokuphathelene kubandakanya ingozi yokuthola okungenani i-imeyili "yeka futhi uyeke".
Ngakho-ke ukuphawula ukuthi "kuvuleke ngokwengeziwe" akungeni.
Isizathu sami sokusebenzisana ukusiza abantu abasebenzisa i-Kingsoft Office nokuthi i-GNU / Linux kernel yaziwa kangcono (kubasebenzisi abasha), ngale ndlela ngokungaqondile imiqondo yesoftware yamahhala izokwaziwa kangcono.
Ungalindeli ushintsho olukhulu kusuka kuLibreOffice futhi ungaceli isuti enikeza ukuhlanganiswa okugcwele nama-desktops we-Gnu / Linux.
Abathuthukisi beLibreOffice bazokutshela ukuthi ngeke uzibone izinguquko ezinqala kuLibreOffice lelo iqiniso.
Ngivumelana nesimo seLinus Torvalds.
ULinus akazange anqikaze ukwamukela ukungena kukaValve. Sidinga ukuxhaswa yizinkampani ezinjengeValve neFreeware ukuze uhlelo olusebenzayo lwaziwe kangcono emhlabeni wonke, uma kungenjalo asisoze seqa 2% noma 3% yabasebenzisi emhlabeni wamakhompyutha, angifuni ukubona i-GNU / Linux imile.
kunezinye izinhlobo zamafayela ongahlanganyela kuzo ezilula ngokwengeziwe, lapho ukuhumusha kwenziwa futhi ithegi yokuhumusha iguqulwa ukusuka ku- to. Ngokuvamile ziyimibala nezinto ezilula, ngakho-ke noma ngubani onesifiso nesikhathi esincane angasiza.
Okuthunyelwe okuhle kakhulu Mariano 🙂
pucha Ngisuse amathegi: kusho ...
bah! .. uvule isiqedile, kubakaki abancane.
Ingxoxo edalwe yilesi sihloko iyathakazelisa, ingigcwalisa ngokuziqhenya ukubona ukuthi kunabantu abaningi baseVenezuela abahamba kulo mhlaba omkhulu wesoftware yamahhala.
Umbuzo wami kulabo abaphawula lapha yilokhu okulandelayo: Mangaki ama-suites asehhovisi akhona okwamanje ayimfihlo noma amahhala okuyindaba ekhathaza uM $? Futhi uma kukhona okukodwa, inika miphi amathuba umsebenzisi ukuthi afune ukusebenza ngokugcwele nayo?
Umbono wami othobekile ngukuthi i-WPS KSOffice noma yini ebizwa ngayo imele enye indlela yize ingekho mahhala ngokuphelele, kuyindlela enhle ehlukile.
Ngenqubekela phambili enayo, ngingasho ukuthi kusasele izinyanga ngaphambi kokuba sibone imiphumela, ngokwengxenye bekungaphoqa u-M $ ukuthi abheke uhlobo lwayo lwe-freeware futhi abantu be-LO bangayenza icabange, ngoba iqiniso ukulahlekelwa abasebenzisi kukwenza ucabange futhi kuze kube manje ngibona kuphela ukuthi i-KSOffice iyona ethola abasebenzisi futhi isazoqhubeka nokwenza kanjalo ngoba ibukeka kahle nje futhi kwesinye isikhathi idiliza noma yikuphi ukusebenza okwengeziwe, kulezi zinsuku kunjalo futhi ngiyangabaza ukuthi izoshintsha esikhathini esifushane.
Ngibonga wonke umuntu ngokuphawula, ngifunde okuncane kini futhi ngiyethemba niqhubeka nale ntambo.
Ukubingelela okuvela eCaracas, eVenezuela
arturo garcia kusho
Ngicabanga ukuthi, noma kungebona bonke abasebenzisi beKingSoft Office abazovuma ukusebenzisana nokuhumusha (isihloko sokuqala), labo abenza kanjalo bazokwenza ukusetshenziswa kwabo "komuntu siqu" kwesoftware kube "ngokunethezeka" (okungakhokhelwa) . . . futhi ngenxa yalokho. . . kubukeka njengokushintshana okwamukelekayo ukusebenzisana ngokushintshanisa ukuthola isoftware yamahhala engithemba ukuthi yinhle. . . (Ngisanda kuyifaka)
Phendula ku-arturo garcia
UBenjamin Morales kusho
Mariano, ngiyaxolisa ukuthi lawa mazwana awaphathelene nokuthunyelwe kepha ... UngumArgentina?
Phendula uBenjamín Morales
okunye ukuhumusha kweKingSoft kepha kweWindows .. ??…
I-Euclides Gonzalez (Panama) kusho
Ngifuna ukwazi ukuthi ngabe kukhona iphrojekthi yokuhumusha kepha eyamawindi.
Ngakolunye uhlangothi, ukugxeka nakho akubakhokhi. Futhi bachitha isikhathi.
Phendula u-Euclides Gonzalez (Panama)
Ing. Armando Ibarra kusho
Ubathumele iskripthi se-bash asidala ukufaka (uma kungenjalo) iphakheji yehhovisi le-kingoft ku-Arch linux noma Ubuntu, futhi ikhiqiza i-zip ukushintsha ulimi lube yiSpanish ekhaya lakho
Futhihalalisela le bhulogi, ngoba ikhuluma ngokuhamba phambili (ngombono wami) Uhlelo Lokusebenza lwe-GNU / Linux
Phendula u-Ing. U-Armando Ibarra
kahle, ngenkathi wonke umuntu ephikisana, ngaqala ukuyihumusha ngendlela yami, ngqo futhi ngedwa .. lapho ngabelana!
isibhamu hs kusho
Ngibheke i-wps futhi inokusebenzisana okuhle ne-Microsoft Office, bengizokucela ukuthi ushicilele ngokushesha ukuhumusha okuthile okungenani kwesixhumi esibonakalayo ukuze izinkulungwane zabasebenzisi zikusebenzise ngokushesha (kuyisidingo esikhulu), lokhu kuzokhulisa ukuthandwa kwe i-wps nokulindelwe Kwezinguqulo eziphelele kakhulu ezilandelayo ezinganikezwa, kepha ukuze zingaphelelwa isikhathi, kuyadingeka ukuthi uthathe isinyathelo ngokushesha.
Phendula ku-gunnar hs
Kulokhu okuthunyelwe sikukhombisa ukuthi ungayenza kanjani i-WPS Office ngeSpanishi. Ngikushiya uxhumekile.
Sawubona, ngiyaxolisa ngokushintshwa kwengqikimba, kepha njengoba sengibuyekeze ama-wps ngohlobo lwe-15 angikwazi ukwenza kungasebenzi izifanekiso eziku-inthanethi ezivela ekuqaleni, noma angikwazi ukuthola inketho yokuzivimbela.
Dlala nge-GIMP: Imigqa Yamandla
Lungisa: ICinnamon ayinciphisi noma inyuse ukukhanya ku-Arch Linux